China Aluminium ngefoyile ye ngelaphu Ukwenziwa kunye Factory | Jiashun
Umxube we-silicone tape
Ifoyile yealuminium edityanisiweyo yengubo yeglasi yefayibha yamkela itekhnoloji ekhethekileyo yokuqhubela phambili. Umphezulu wefoyile ye-aluminium edibeneyo igudileyo kwaye ithe tyaba, ukukhanya okukhanyayo kuphezulu, ubude be-longitudinal kunye nokuthe tye kwamandla amakhulu
Ifoyile yealuminium edityanisiweyo yengubo yeglasi yefayibha yamkela itekhnoloji ekhethekileyo yokuqhubela phambili. Umphezulu wefoyile ye-aluminium edibeneyo igudile kwaye ithe tyaba, ukukhanya okukhanyayo kuphezulu, ubude be-longitudinal kunye ne-tension ye-tensile inkulu, ukuvumeleka komoya akunakulinganiswa, ukusebenza ngokutywina kulungile, kwaye ukusebenza ngokuchasene nokubola kuphuculwe kakhulu: umphezulu ngefoyile ye-aluminiyam yengubo yeglasi yefayibha iphuculwe kakhulu emva konyango olukhethekileyo lokulwa umhlwa. Kwangelo xesha, kusetyenziswa i-polyethylene yokuncamathela komoya oshushu ukunqanda ukubola kunye nokubola kumphezulu we-aluminium foil ebangelwa kukufuma okanye isisombululo. Ukucinezela ngokuthe ngqo ukudityaniswa kokutshisa kungagcina i-adhesive edibeneyo kunye neendleko ze-veneer composite. Ukuthambeka kokufuma kuncinci kwaye kuthintelwa isiphumo sokuthintela ukufuma: ubushushu be polyethylene umaleko embindini weglasi yefayibha yelinen yealuminium iyatyeba kunaleyo yomphezulu jikelele, kunye nokungena komphunga wamanzi kuncinci. Ke ngoko, umphumo wokuthintela ukufuma ungcono kwaye izinto zokwambathisa ezifana noboya beglasi zikhuselekile ngokuthembekileyo.
Ubunzima (g / m2)
I-aluminium foil ilaminishwe i-fiberglass yelaphu yeglasi yefayibha yelaphu eneempawu zomphezulu ogudileyo, ukukhanya okuphezulu, ukukhanya kwamanzi, ubungqina bokungenisa umoya kunye nesitywina.Kusetyenziselwa ubukhulu becala lokutywina ubushushu kunye nomphunga wamanzi umqobo wokuthintela umphunga, isibhakabhaka, indlela, iglasi yoboya , uboya belitye, uboya bezimbiwa kunye neplastiki yerabha yokwambathisa.
1. Ukuxhathisa umhlwa kuye kwanda kakhulu
2. Ukungena komphunga emanzini kuncinci, ukomeleza umphumo wamanzi othintela umphunga
1.Izinto zokwambathisa ubushushu 'zokufaka uphawu lokutywina ubushushu kunye nomphunga wamanzi umqobo womqobo woboya beglasi, uboya belitye, irabha kunye neemveliso zeplastiki njalo
2. Ukufudumeza ubushushu kunye neemfuno zokuthintela umphunga wamanzi kumbhobho wamanzi ashushu napholileyo kunye nobushushu obufunekayo kwisakhiwo.
Isaziso: Iglu yefoyile yealuminiyam yelaphu le-fiberglass liyindalo. Ukuba iqondo lobushushu lidlula iidigri ezingama-80, iglu iya kugungqa, ize ifoyile yealuminiyam kunye nelaphu lihlukane.
1.Are ungumrhwebi okanye umenzi?
A: Singumvelisi, sinemveliso yethu kunye nemigca emi-6 yokuvelisa
2.Yintoni ixesha lokuhambisa?
A: Malunga neentsuku ezi-2-15 emva kokuba sifumene idiphozithi.
A: Ewe, sinokunikela ngesampulu, kwaye ezinye iisampulu zisimahla, kodwa siya kuhlawulisa iindleko zokuhambisa.
4. Ngaba unakho ukuhambisa ngokubonisa?
A: Ewe, sinokuhambisa nangayiphi na indlela yokubonisa, ulwandle okanye ukuhambisa umoya.
Zithini iindlela zakho zokuhlawula?
A: Imigaqo yokuhlawula: T / T 30% -50% idipozithi emva kokuqinisekisa iodolo, intsalela emva kokulungiswa kwempahla ngaphambi kokuhambisa okanye uL / ​​C, okanye iNtshona Union ngemali encinci.
Egqithileyo Ilaphu elicwecwe ngelaphu
Okulandelayo: ilaphu ephezulu ye-fiberglass yelaphu